Posted by ဦးဂင်ကြီး at 11:58 PM
Anonymous, January 15, 2009 at 1:06 AM
ကိုဂင် ငယ်ငယ်က အဖြစ်လေးကိုရေးပြထားတာ ရိုးရိုးလေးတင်ပြထားပေမယ့် အတွေးတွေအများကြီး ရစေတယ်၊ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ကလေးဘ၀လေးတွေကို တကယ်လို့ပြန်ရရင် ပြန်လိုချင်မိတယ်လို့ လည်း မဖြစ်နိုင်တာကို တွေးမိတယ်၊
ခေါင်ခေါင်, January 15, 2009 at 4:18 AM
ဦးဂင် က အရေးအသား အရမ်းကောင်းတော့ .. ဖတ်ရတာ မျောသွားတယ်...
လေးစားပါတယ်.. ကျော်ဦးကို ပြန်ထိုးလို့..ဟီး..
နောက်တစ်ခါ ခေါင်ခေါင့်ကို အနိုင်ကျင့်တဲ့သူ ရှိရင် ဦးဂင်နား လာတိုင်မယ် ...နော်
ခေါင်ခေါင်, January 15, 2009 at 4:26 AM
ှုဦးဂင် ရေးတာ တစ်ကယ်ကောင်းတယ်.. သိလား.. အတွေးလေးအရမ်း ကောင်းတယ်..
အိမ်ကျယ်မဖြစ်အောင် .. ကြိုးစားပါ့မယ်...
အရင်ကတော့ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်.. ဟီး။။ တစ်ကယ့် အိမ်ကျယ်.. အိမ်ကလွဲရင် ဘယ်မှာမှ မကျယ်ရဲဘူး. တိတ်လို့...
Anonymous, January 15, 2009 at 8:56 AM
အနော်လည်းဝင်ဆုတောင်းပေးတယ်.. မတရားမှုဟူသမျှ ကျဆုံးပါစေ.. !!!!!
မေ့သမီး, January 15, 2009 at 9:34 AM
ကိုယ့်ထက်အားနည်းတဲ့သူတွေကို အကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့သူတွေမှန်သမျှ တစ်နေ့တော့ မလွဲမသွေဒီဒဏ်ကိုပြန်ခံရဦးမှာပဲ။
တောင်ပေါ်သား, January 15, 2009 at 5:03 PM
အကိုရေ စဉ်းစားစရာတွေ အတုယူစရာတွေ အများကြီးနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်
ယုန်ကလေး, January 15, 2009 at 7:00 PM
ဦးဂင်ရေ စာတွေလာဖတ်သွားတယ် ရေးထားတာတွေ တော်တယ်နော် အင်း ငယ်ငယ်က အဖြစ်ကိုပါပြန်သတိ ရတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ ကော်ကွင်း မှုတ်တဲ့အဖြစ်လေးပါ။
OWAY AUNG, January 15, 2009 at 10:06 PM
အခုလက်ရှိ ဘလော့ဂါ လောကအဆုံး မတရားလုပ်တတ်တဲ့ သူတွေတွေ့ရင် ကျနော်မကြိုက်ပါဘူး အထူးသဖြင့် အင်အားနဲ့ အနိုင်ယူတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို မဟုတ်မခံစိတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ချင်တာပါပဲ။
ယောနသံစင်ရော်, January 17, 2009 at 6:00 AM
ဦးဂင် .. ကလေးဘဝအကြောင်းလေးတွေဖတ်ရတော့ ငယ်ဘဝကိုလွမ်းမိစေပါတယ်.။
masumon, January 19, 2009 at 6:50 AM
ဟုတ်တယ် ပြန်ချရမယ် ညီမမှာလဲ ငယ်နိုင်လဲ ရှိတယ် ကြီးနိုင်လဲ ရှိတယ် ပြန်ချဖို့ တွေးရင်းနဲ့ မဗျင်းလိုက်နိုင်သေးဘူး လူချင်း အနိုင်ကျင့်တာလဲ ခံရတယ် စကားနဲ့ အနိုင်ကျင့်တာလဲ ခံရတယ်..ပြန်ပြောလိုက်ရမှာ အားနာနေတာ တစ်ခုပဲ..ကိုယ့်ကိုနှိပ်ကွပ်ပေမယ့် ကိုယ်က ပြန်ပြောလိုက်ရမှာကို အားနာနေတာ ရှိတယ်
Anonymous, January 22, 2009 at 5:50 AM
ကလေးဘ၀ လေးတွေ ဖတ်ရှုသွားပါတယ်ဗျို့
Mr.Guiter, January 26, 2009 at 2:18 AM